SHWIII!: Ngiyethulela isigqoko iSafa, iyabukisa ngobuhlathi bayo - Impempe
SHWIII!: Ngiyethulela isigqoko iSafa, iyabukisa ngobuhlathi bayo
May 6, 2021 Impempe.com
Ngiyazi ukuthi lena yinto engihlale ngihlale ngiyenze noma ngibhale ngayo kodwa ngibona kufanele ukuthi ngingalinge ngikhohlwe ukushayela iSouth African Football Association (Safa) ihlombe ngobuhlathi bayo.
Phela iSafa ayiphezi ukuba ngamahlathi ngakho kumele inconywe ngalo msebenzi wayo ehlale yenza isiqiniseko sokuthi ayiphambuki nakancane kuwona.
Selokhu iSafa iqale ukuthungatha umqeqeshi omusha weBafana Bafana ibilokhu ikukhombisa ukuthi yona iyalushaya udaka futhi iyakwazi ukwenza izithembiso engeke izigcine.
Angisho ukuthi yinto elula ukuthungatha umqeqeshi kodwa ngiyazibuza nje ukuthi nakwamanye amazwe abaphathi bebhola bakhona basenga ezimithiyo kwabezindaba njengoba kwenza iSafa yini.
Ngiyayibona nje eyokulokhu iSafa ihlehlisa ukumenyezelwa komqeqeshi, nokuyinto ebesiqala ukuba yiminciza.
Kodwa ngivele ngaphelelwa amandla ngesikhathi kuvela ukuthi uMolefi Ntseki akazange axoshwe kwiBafana.
Akaxoshwanga kanjani manje uNtseki ngoba iyona kanye iSafa eyakhipha isitatimende ithi seligqabukile igoda phakathi kwayo nalo mqeqeshi?
Empeleni nje kwaze kwaputshuka izindaba zokuthi uNtseki akafuni ukushiya kwiBafana ngemuva kokuthi iqembu lakuleli lihluleke lancama ukuzibekisela indawo kwi-Africa Cup of Nations (Afcon) ezokuba seCameroon.
Kwakushiwo lokhu ngoba kuthiwa iSafa yase ivele imcelile ukuthi asule lo mqeqeshi. Nakhoke phela sesitshelwa umhlolo wokuthi uNtseki usekhona kwiSafa futhi kukhona nesikhundla abesasazelwa ngaso.
Empeleni kuyavela ukuthi uNtseki angase abe ngelinye lamaphini omqeqeshi omusha uHugo Broos, ozofika nelinye iphini uma esezoqala umsebenzi wakhe kwiBafana.
Kuthiwa uBroos uzoba namaphini amabili kanti elinye lawo kuzobuka ngelakuleli.
Angikaze ngisibone isiphithiphithi esinje mina selokhu ngazalwa. Yinhlangano enjani lena efike isho into kwabezindaba, gwiqiqi ibuye iziphikise yona?
Kusobala phela ukuthi ngelinye ilanga iSafa izositshela ukuthi seyiqashe uJose Morinho noma uPep Guardiola, bese ibuye isitshele ukuthi chabobo ibizidlalela yona.
Ngimangale kakhulu ngibona intatheli yethilevishini ithi kade belindile njengezintatheli ngesikhathi kunesithangami nabezindaba ngoLwesithathu kodwa sebeyazi vele ukuthi umqeqeshi kuzoba uHugo Broos, yize isithangami kade singakaqali.
Ithe okwenze lokhu ukuthi uDanny Jordaan nezinye izikhulu zeSafa bese bevele bekuqinisekisile kwabanye abebekhuluma nabo abayizintatheli zomsakazo ukuthi ubani ozoba umqeqeshi weBafana.
Benza lokhu nje abakasibambi isithangami nabezindaba ebese kudlule isikhathi esingangehora kulesi ebesishiwo, belindile.
Kanti kwakhala nyonini ngempela kwiSafa? Yikuphi ngempela le nhlangano efuna ukukwenza kahle?
Angifuni ukukhuluma ngoBroos ngoba ngiyazi uzozidlela imali eNingizimu Afrika bese ephinda kwelakubo eBelgium singazuzanga lutho.
Nokho ubuhlathi, ukungahloniphi nokusenga ezimithiyo kweSafa kubuye kucasule. Shwiii!!
USihle Ndlovu ngumhleli weMpempe
Previous Previous post: ISharks isibheke ukwenyusa izinga kwiLions
Next Next post: IPirates ibhodlele kwiLeopards iyibhaxabula kanzima